Tums (တမ်းစ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Tums (တမ်းစ်)
Tums (တမ်းစ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Tums (တမ်းစ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Tums (တမ်းစ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Tums® ကို ရင်ပူခြင်း၊ အစာအိမ်နာခြင်းများအတွက် အများဆုံး အသုံးပြုကြသည်။ တခြားသော အခြေအနေများ အတွက်လည်း ပေးကောင်းပေးနိုင်ပါသည်။ ဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးပါ။
Tums (တမ်းစ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆေးကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း သောက်ရမည်။ သင့်ကိုပေးထားသမျှ အချက်အလက်များအားလုံးကိုဖတ်ပါ။ ညွှန်ကြားချက်များကို သေချာလိုက်နာပါ။ အစာရှိရှိမရှိရှိသောက်နိုင်ပါသည်။ မျိုမချခင် ဆေးကိုဝါးပေးပါ။
Tums (တမ်းစ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Tums® (calcium carbonate) ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နှင့် စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားခြင်းက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းနည်းပင် ဖြစ်သည်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်ခြင်းနှင့် ဆေးအနေအထား ပျက်ယွင်းမှုများ မဖြစ်စေရန် Tums® (calcium carbonate) ကို ရေချိုးခန်းတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ပါနှင့်။ Tums® (calcium carbonate) ဆေးအမျိုးအစားနှင့် ဆေးထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီ ကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းသောပုံစံ ကွဲပြားခြားနားမှုများ ရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အတွက် ဆေးဘူးအခွံ၌ပါသော သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု ညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအား မေးမြန်းခြင်းကို အမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရစေရန်အတွက် ဆေးဝါးအကုန်လုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့်ဝေးရာတွင် ထားပါ။
Tums® (calcium carbonate) အားအိမ်သာထဲပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချခြင်းမျိုးအား မလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးများကို မလိုအပ်တော့သည့်အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့် အခါများတွင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီး၏။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ မည်ကဲ့သို့စွန့်ပစ်ရမည်ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်၏ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်နိုင်ပါသည်။
Tums (တမ်းစ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ဤဆေးကိုမသုံးခင် အောက်ပါတို့ရှိပါက ဆရာဝန်အား ပြောပြပါ။
ကိုယ်ဝန်ရှိလျှင်၊ သို့မဟုတ် နို့တိုက်နေရလျှင်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကိုယ်ဝန်ယူရန် ပြင်ဆင်နေစဉ် သို့မဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေရစဉ်၌ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်ဆေးကိုသာ သုံးစွဲသုံးရမည်ဖြစ်သည်။
တခြားဆေးများကို သုံးစွဲနေရလျှင်။ ထိုဆေးများတွင် ဆရာဝန်အညွှန်းမပါပဲ ဝယ်ယူနိုင်သည့်ဆေးများ ဥပမာ အပင်ထွက်ဆေးများနှင့် ဖြည့်စွက်ဆေးများ စသည်တို့ပါဝင်ပါသည်။
Tums® တွင်ပါသော active agent များ inactive agent များနှင့် ဓါတ်မတည့်မှုရှိလျှင်။
တခြားသော ဖျားနာမှုများ၊ ကမောက်ကမရောဂါများ၊ တခြားကျန်းမာရေးအခြေအနေများရှိနေလျှင်။
ဤဆေးကိုသောက်နေပါက သောက်နေကြောင်း ကျန်းမာရေးဝမ်းထမ်းများကိုပြောပြပါ။ ဆရာဝန်၊ သူနာပြုများ၊ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်များနှင့် သွားဆရာဝန်များအားလုံးကိုပါဝင်ပါသည်။
Tartrazine နှင့် ဓါတ်မတည့်ပါက ဆရာဝန်ကိုပြောပါ။
ဤဆေးသည် တခြားသော်ဆေးများကို ခန္ဓါကိုယ်ထဲမဝင်နိုင်အောင် နှောက်ယှက်နိုင်ပါသည်။ တခြားသောက်ဆေးများသောက်နေရပါက ဤဆေးနှင့်အချိန်ခြားပြီးမှသောက်ရပါမည်။ ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးပါ။
ကိုယ်ဝန်ရှိလျှင် သို့မဟုတ် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန် အစီအစဉ်ရှိပါက ဆရာဝန်အားပြောပါ။ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးများအားသိရန်အတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
နို့တိုက်ကျွေးသူဆိုပါက ဆရာဝန်ကိုပြောပါ။ ကလေးတွင် ဖြစ်လာနိုင်သည့်ဆိုးကျိုးများကို ဆွေးနွေးရန်လိုနိုင်ပါသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Tums (တမ်းစ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သောလေ့လာစမ်းသပ်ချက်များ မရှိပါ။ ဆေးမသုံးစွဲမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။
Tums (တမ်းစ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အောက်ပါလက္ခဏာများသည့် ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့် ဆက်စပ်တတ်သောကြောင့် ဖြစ်လာပါက ဆရာဝန်ကိုပြောခြင်း သို့မဟုတ် အရေးပေါ်ဆေးကုသမှုခံယူခြင်းတို့ ပြုလုပ်ရပါမည်။
ဓါတ်မတည့်သည့်လက္ခဏာများ – အကွက်ထခြင်း၊ အင်ပျဉ်ထခြင်း၊ နီခြင်း၊ ရောင်ခြင်း၊ အရည်ကြည်ဖုထခြင်း၊ ယားခြင်း၊ ရင်ကြပ်ခြင်း၊ အသက်ရှူရ စကားပြောရခက်ခြင်း၊ မျက်နှာ၊ ပါးစပ်၊ နှုတ်ခမ်း၊ လျှာ၊ လည်ချောင်းတို့ ဖောင်းကြွလာခြင်း။
ယခုဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုခံစားရမှုမှာ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမှု ရှိနိုင်ပါသည်။ အထက်ဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင် မပါဝင်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်းရှိနိုင်သည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါကသင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Tums (တမ်းစ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Tums® (calcium carbonate) သည် သင်အခုသောက်သုံးနေသည့် တခြားသောဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးအာနိသင်ပြောင်းခြင်းနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သော ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သောဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်စေရန် သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေသော ဆေးဝါးများအားလုံးကို စာရင်းပြုစုထားပြီး (စာရင်းလုပ်လျှင် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည်များ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေသည်များ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးပါရပါမည်။) ဆရာဝန် သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအား အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါပဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏပြောင်းလဲခြင်း စသည်တို့ မပြုလုပ်ပါနှင့်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Tums (တမ်းစ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Tums® (calcium carbonate) က အစားအသောက် သို့မဟုတ် အရက်သေစာနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သောပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သည့် ဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်လာစေရန် အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Tums (တမ်းစ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Tums® (calcium carbonate) သည် လက်ရှိသင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့် သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ သင်၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအားပိုဆိုးသွားစေခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲသွားခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးရန်အရေးကြီးပါသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Tums (တမ်းစ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးတွေအတွက် Tums (တမ်းစ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးလူနာများ၌ အချိုးအစားဘယ်လောက်ပေးရမည်ဆိုခြင်းကို အတည်မပြုရသေးပါ။ သင့်ကလေးငယ်အတွက် သောက်သုံးရန် စိတ်ချရမှုရှိချင်မှရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဘယ်ဆေးဝါးမဆို အသုံးမပြုရသေးခင်၌ စိတ်ချရမှုအနေအထားကို အပြည့်အဝနားလည်ဖို့ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အချက်အလက်များထပ်မံရရှိရန်အတွက် သင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Tums (တမ်းစ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Tums® (calcium carbonate) ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
အရေးပေါ်အခြေအနေ သို့မဟုတ် ဆေးပမာဏလွန်သွားသည့်အခြေအနေများတွင် အရေးပေါ်ဆေးရုံဆေးခန်းများသို့ သွားရောက်ကုသမှုခံယူပါ။
Tums® (calcium carbonate) ကိုသုံးစွဲဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့်အချိန်တွင် အမြန်ဆုံးသုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သုံးရမည့်အချိန်နှင့် နီးကပ်နေပြီဆိုပါက လွတ်သွားသောအကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်၌ပင်သုံးလိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏအား နှစ်ဆတိုးတာမျိုး မလုပ်ပါနှင့်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ နိုဝင်ဘာ 26, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဧပြီ 29, 2019
Tums®. https://www.drugs.com/cdi/tums.html. Accessed November 16, 2017
Tums®. https://www.tums.com/antacid-products/ultra-1000/. Accessed November 16, 2017
ရင်တွေပူပြီးနိုးလာတဲ့ညတွေ ပြန်အိပ်မရတာ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
စိတ်ဖိစီးလို့ ဗိုက်အောင့်တာ ဒီတိုင်းကြိတ်ခံနေတော့မလား
ညအရမ်းနောက်ကျမှ အစာစားတဲ့အခါ ဘာဖြစ်နိုင်လဲ
ရင်ပူခြင်းကို သက်သာစေမယ့် အစားအသောက် (၆) မျိုး
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ရင်ပူခြင်းကို ဘယ်လိုသက်သာအောင် လုပ်မလဲ
ရင်ပူတာကို သက်သာစေဖို့ အစားအသောက်၊အနေအထိုင်တွေ ဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲ